जुम्लाको समग्र विकासका लागि साझा प्रतिवद्धता जरुरी छ
कृषि - वातावरण
शुक्रवार, माघ ७, २०७८ ०४:३७:०५ युनिकोड
कर्णालीमा भलिबल खेल्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको इन्डोर कवर्ड हल बन्ने
यी हुन् २११ जना माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका सदस्यहरु (नामावली सहित)
बेलायती राजदूतद्धारा अर्थमन्त्री शर्मासंग भेट
कर्णालीमा ११ हजार पाँच सय हेक्टरको धानबाली नष्ट, क्षतिपूर्ति दिने सरकारकाे निर्णय
एमाले अधिवेशन : अध्यक्ष ओलीकै वडामा भएन सहमति, निर्वाचन हुँदै
जुम्लाको हवाइ उडान एजेन्टको हातमा
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बीरेन्द्रनगरको अध्यक्षमा पद्मा बिष्ट
यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवाको बेलायत भ्रमण तालिका
एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा भौतिक मन्त्री थापा
एमाले अधिवेशन : ओलीले एकसाथ ७५३ वटै पालिकालाई सम्बोधन गर्ने
कान्तिका सेजुवाल, मेयर, चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला
बुधवार, कार्तिक ६, २०७६ यार्सान्यूज
चन्दननाथ नगरपालिका साविकको कर्णालीको प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यापारिक केन्द्र थियो । त्यो साख, गरिमा र महत्व जोगाउने नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
चन्दननाथ जुम्लाको एक मात्र नगरपालिका हो । यो नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि मास्टर प्लान बनाएका छौँ । पुराना अलपत्र योजनाहरुलाई पूरा गर्ने र नयाँ योजनाहरु लागु गरिरहेका छौँ । हाइड्रो पावर, सडक र ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापन हाम्रो नगरको अहिले प्रथामिकतामा रहेका छन् । कार्तिक स्वामी, दानसाँघुदेखि बजार हुँदै जोड्ने चन्दननाथको आफ्नै रिङ रोड निर्माण हुनेछ । हरेक वस्तीमा कम्तिमा एम्वुलेन्स पुग्न सक्ने सडक हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।
तपाईले मास्टर प्लानको कुरा गर्नुभयो । जुम्लामा लगानी सम्मेलनको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो । त्यो के अव हुँदैन ?
जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिकाले तयारी गरेको लगानी सम्मेलन पोष्टपोन्ड भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाले फेरि आवाज उठाइरहनु भएको छ । पुनः कसरी संचालन गर्ने भनी छलफल भएको छैन । यो जुम्लाको सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि म फेरि पनि भन्छु लगानी सम्मेलन आवश्यक छ । आयोजक को हुने ? को नहुने भन्ने प्रश्न गौण हो । कसरी जुम्लाको विकास गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
नगरपालिका पनि एउटा जिम्मेवार स्थानीय सरकार हो । यसले आफ्नो विकासका लागि कानुन बनाउन पाउँछ । संघीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय समेत आयोजक हुने गरी पहिले आयोजक समिति बनेको थियो । जुम्लाका स्थानीय निकायहरु स्वतः आयोजक हुन भन्ने मेरो बुझाई थियो । चन्दननाथ नगरपालिकाले तय गरेको लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक हुने थियो र हुनुपर्दथ्यो । तर विडम्वना त्यो पोष्टपोन्ड भयो । वुद्धिजीवी, नागरिक समाजले जिल्लाको समग्र विकास, समविकासका लागि सोच्नै पर्दछ ।
त्यो सम्मेलनको तयारीका लागि १० वटा राजदूतसँग भेटे । इन्डिया, जापान, कोरिया, चाइनालगायतका १० वटै राजदूत जुम्ला जान उत्सुक हुनुहुन्थ्यो । जुम्ला पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको, अर्गानिक कृषि उत्पादन भण्डार भएको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न सम्मेलन गर्न खोजिएको थियो । जुम्लामा देश, विदेशका प्रतिष्ठित लगानीकर्ता, राजदुतहरु, मन्त्रीहरु सहभागी भएर गरिने लगानी सम्मेलन फेरि पनि नितान्त आवश्यक छ ।
देशभरि विकासको डुल्पिकेटिङको समस्या छ भनिन्छ । रारा जान चेरे चौरतिर नै दुई सडक खनिएको देखिन्छ ? यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
जुम्ला ऐतिहासिककालदेखि विभिन्न जिल्लासँग विभिन्न नाकाबाट जोडिएको जिल्ला हो । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसँग आआफ्नै प्रकृतिका वाटाहरु छन् । जुम्लामा सिंजा हुँदै रारा जाने बाटो, उर्थु हुँदै रारा जाने बाटो पनि छ । तर जुम्ला बजार आएको हरेक पर्यटकका लागि छोटो दुरीको बाटो निर्माणका लागि पहिले जिविसले खाली भदालीसम्मको आधा बाटो बनाएको थियो । त्यो पूर्ण गर्नुपर्ने थियो । त्यो अलपत्र योजनालाई हामीले अगाडि बढाएका हौँ । दोस्रो वडा कार्यालयको लक्ष्यअनुसार छोटो बाटोबाट पटमारा जानका लागि खनिएको हो । वडा कार्यालयले पटमारा जानका लागि खनेको वाटो पनि प्राकृतिक दृष्टिले निकै रमणीय ठाउँ हुँदै जान्छ । यो डुप्लिकेटिङ भएको होइन ।
जुम्ला बजारमा विजुलीको अभाव जहिल्यै भइरहेको हुन्छ ? जुम्लाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाइडे पावरलाई जोड दिइरहेका छौँ । ठेकेदारले पोल विस्तारमा ढिलाई गरेको हुनाले जुम्लामा लोडसेडिङको अवस्था छ । पोल विस्तारको काम सम्पन्न हुने वित्तिकै जुगाड खोला १०० र ठिन्केको ५८ किलोवाट वत्ति हामीसँग उपलब्ध हुनेछ र यसले जुम्लाको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । दोस्रो जुम्लामा विद्युत प्राधिकरण र अन्य नयाँ वत्ति उत्पादन गर्ने आयोजनासँग समन्वय तथा कानुनी व्यवधान हटाउन बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकार दिने वित्तिकै जुम्लाको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ र उज्यालो नगर बन्नेछ ।
तपाई आफै शिक्षण पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो ? तर तपाईले नै शिक्षकहरुको तलव रोकिदिनु भयो भन्ने छ ? यसको वास्तविकता के हो ?
म अहिले शिक्षक होइन । नागरिकहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । यो शिक्षकहरुको तलव रोकिएको होइन, विद्यालयको खाता रोक्का भएको हो । यो शिक्षा समिति, संघीय सरकारको कानुन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पर्नुगठन गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गर्यौँ । चन्दननाथभित्रका १७ विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरे । चन्दननाथ मावि र कर्णाली माविले गठन गरेनन् ।
यो चन्दननाथ नगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएको मात्र हो । संघीय कानुन, प्रादेशिक र नगरका कानुन र नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयनसँग यो विषय जोडिएको छ ।
जुम्लामा ल्याण्डफिल्ड साइडको समस्या छ ? खेत नजिकै ल्याण्डफिल्ड बनाएको हुनाले नजिकको खेतमा धान नै फलेन भन्ने समाचार पनि आएको थियो । खेतमै ल्याण्डफिल्ड साइड, यो त दीर्घकालीन समाधान भएन नी ?
अस्थायी ल्याण्डफिल साइडका व्यवस्था गर्दा समय समयमा वातावरण प्रदुषित भएको गुनासो आइरहेको छ । ल्याण्डफिल्डको लागि एआई गरी डीपीआर पनि गरेका छौँ । वाह्र करोड बजेटको खाँचो पर्ने भयो । यसका लागि संघ, प्रदेश, शहरी विकास र खानेपानीमा हामी धाइरहेका छौँ । कसैले पैसा दिन सकिरहेका छैनन् । नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो दीर्घकालीन ढंगले नै समाधान गर्ने गरी नगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइडको डीपीआर गरेको हो ।
पर्यटन वर्ष २०२० सुरु हुन केही महिना मात्र बाँकी छ । चन्दननाथ, भैरवनाथ सय गन्तव्यमै परेनन् । तपाईहरुले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि के तयारी गरिरहनु भएको छ ?
चन्दननाथ, भैरवनाथजस्ता ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पनि सय गन्तव्यमा नै परेनन् । यो राज्यको एक पूर्वाग्रही व्यवहारजस्तो देखियो । पर्यटन बर्ष २०२० का संघीय सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै घोषणा गरेको छ । तर हामीसँग कुनै सहकार्य भएको छैन । तर पनि २०२० लाई सहयोग र स्वागत गर्न हामी एकदमै तत्पर छौँ । पर्यटकहरुका लागि सुरक्षित र सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध गराउन नगर कटिवद्ध छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव कानुनसँग बाँझिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले भर्खरै प्रदेश ६ को सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएको छ ? यो संघीय जनप्रतिनिधिले तलव लिने र स्थानीयले लिँदा बाँझिने अवस्था देखियो । यो विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
संविधानमा जे कुरा छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि आर्थिक नियम, कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्ने र त्यो आम्दानीसँग जोडिएर सेवा, सुविधा लिने कुरा नै सही हो । उत्पादन भएपनि मात्र वितरण हुन्छ । दाताबाट ऋण लिने अनुदान दिने र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा दीगो हुँदैन ।
समग्रमा चन्दननाथ नगरले योजनागत प्राथमिकता कता केन्द्रित गरेको छ ?
चन्दननाथले उज्यालो नगर, हरेक वस्तीमा एम्वुलेन्स पुग्ने सडक, राराको गन्तव्य सुधार, एयरपोर्टको विस्तार, फोहोर व्यवस्थापन, सुशासनमा जोड दिएको छ । चन्दननाथ नगरपालिकामा आफ्नो मास्टर प्लानअनुसार अगाडि बढ्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही छ ?
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सवैको साझा प्रतिवद्धता अनिवार्य छ । जुम्लाको विकासका लागि सवै गाउँपालिका र नगरको प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सवै नागरिक समाज र वुद्धिजीवीहरुको भूमिकाको खाँचो छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक ६, २०७६, ०८:१९:००
म फेरि गाउँपालिका अध्यक्ष लड्दैन,प्रदेश सांसद लड्छु : लक्ष्मण बम
समयसापेक्ष मैले जनताका केही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सफल भएको छु: रजबहादुर शाही
स्याउको वाइनमा कर्णाली कि मुस्ताङ व्रान्डिङ गर्ने राज्यको दायित्व हो
‘पम्फाफूल’ नाटक मानवीयताको आव्हान हो
कर्णालीमा भलिबल खेल्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको इन्डोर कवर्ड हल बन्ने शनिवार, पुष १७, २०७८
यी हुन् २११ जना माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका सदस्यहरु (नामावली सहित) मंगलवार, मंसिर २८, २०७८
बेलायती राजदूतद्धारा अर्थमन्त्री शर्मासंग भेट आइतवार, कार्तिक ७, २०७८
कर्णालीमा ११ हजार पाँच सय हेक्टरको धानबाली नष्ट, क्षतिपूर्ति दिने सरकारकाे निर्णय आइतवार, कार्तिक ७, २०७८
एमाले अधिवेशन : अध्यक्ष ओलीकै वडामा भएन सहमति, निर्वाचन हुँदै आइतवार, कार्तिक ७, २०७८
जुम्लाको हवाइ उडान एजेन्टको हातमा आइतवार, कार्तिक ७, २०७८
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बीरेन्द्रनगरको अध्यक्षमा पद्मा बिष्ट शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८
यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवाको बेलायत भ्रमण तालिका शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८
एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा भौतिक मन्त्री थापा शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८
एमाले अधिवेशन : ओलीले एकसाथ ७५३ वटै पालिकालाई सम्बोधन गर्ने शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८
प्रचण्ड- नेपाल पक्षको माग विधानअनुसार पार्टी चलाउँ, ओली पक्ष भन्छ : सहमतिमा जाउँ शुक्रवार, श्रावण २३, २०७७
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको नारावाजी र न्यायीक सर्वाेच्चताको वहस आइतवार, श्रावण ११, २०७७
निर्मला पन्त हत्याका २ वर्ष : न हत्याराको पहिचान, न पीडितलाई न्याय ! शनिवार, श्रावण १०, २०७७
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : रोचक तथ्यहरु शुक्रवार, मंसिर ५, २०७७
ट्रम्पले चुनाव हारे तर आफैले जितेको घोषणा गरे मंगलवार, मंसिर २, २०७७
अमेरिकामा ट्रम्प समर्थकहरुको प्रदर्शन आइतवार, कार्तिक ३०, २०७७
प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान सोमवार, श्रावण ४, २०७८
प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य तिब्र बिहिवार, असार २४, २०७८
राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू मुख्यतः आयातकर्ताहरू हुन्, स्वार्थ साम्राज्यवादीहरूसँग गाँसिएको छ
लिन प्याओ मलाई अति घृणा गर्दथेः देङ सिआओ पिङ
धार्मिक तवरले दसैँ मान्नुपर्ने ठीक छैनः मोहन वैद्य
चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा फूकोट कर्णाली हाइड्रो र सुर्खेत–हिल्सा सडक छलफलको विषय बन्नुपर्छ
सत्य, सान्दर्भिक र सदुपयोगी समाचार, विचार र सूचनाका लागि यार्सान्यूज डटकम प्रकाशन गरिएको हो । यार्सान्यूजले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षहरुको विश्लेषण, अन्वेषण र अन्तरक्रियात्मक विचार र समाचारलाई जोड दिनेछ । मौलिक सामाग्रीको उत्पादन र प्रकाशन गर्नेछ ।
यार्सा मिडिया एण्ड पव्लिकेशन
ठेगाना : विरेन्द्रनगर नगरपालिका ३ सुर्खेत ।
सम्पर्क नम्बर : ९८६१०४३५४७
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : १५७२/०७६-७७
अध्यक्ष/प्रधानसम्पादक - देवीराम देवकोटा
कार्यकारी निर्देशक/स्तम्भकार- राजबहादुर कुँवर
सम्पादक- इन्दिरा थारु
कार्यकारी सम्पादक -पशुपता थापा
डेस्क सम्पादक - विवशकुमार सेजुवाल
बजार व्यवस्थापक - प्रेमप्रसाद पाण्डे
#सि जिनपिङ भ्रमण विशेष
© Yarsa News 2022 All rights reserved.